बिहनै गणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज माघ २८ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस, भेटि स्वरूप एक शेयर गरौँ – Voice Samachar
रुहाउने दु’र्घटना: मिनीबसको ठ’क्करबाट एक मोटरसाइकल चालक दिपेन्द्रको मु’त्यु !!
चाणक्य नीति : यी ५ गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैनन्
बाग्लुगं कालिका माइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशीफल
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/बिहनै गणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज माघ २८ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस, भेटि स्वरूप एक शेयर गरौँ
बिहनै गणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज माघ २८ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस, भेटि स्वरूप एक शेयर गरौँ
सबैको सहयोग पाईने हुँदा प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर जुर्नेछ । बोलेर गर्ने कुनै पनि पेशा-व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । समयअनुसार विचार सिर्जना गर्न सकिने हुँदा धेरैको मन जित्न सकिनेछ । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग मिलेर गर्ने कुनै पनि व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । गीत-संगीत तथा मोडलिङ पेशा व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ ।
क्षमता प्रदर्शन गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छोडेर अग्रपंक्तिमा आउँन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाईलो वातावरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखा पर्न सक्छ । मेहनेत गर्दा आँटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलीले लक्ष्य तथा गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । व्यवसाय फस्टाएर लगानीको नयाँ बाताबरण बन्नेछ भने आम्दानीमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ ।
माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुनेछ भने पति-पत्नीबीच अबिश्वास बढ्नेछ । साथिभाई तथा आफन्त हरुको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आयपनि फाईदाको लागि अलि बढी मेहनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य समस्या आउने भएपनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन । पढाई लेखाईमा अलि बढिनै समय दिनुपर्नेछ । तापनि लामो दुरिको यात्रा हुने योग रहेकोछ भने विदेशमा बसेर व्यापार गर्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
परिवार,आफन्त र ईष्टमित्र सँग आत्मियता तथा सद्भाव बढ्नेछ । सामाजिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । राजनीतिक काममा सफलता मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । शत्रुहरु पराजित हुनेछन् । पति-पत्नीबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । राजनीति तथा समाजसेवा जस्ता क्षेत्रमा तपाईको नाम चर्चामा आउनेछ । तथा बिवादित बिषयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछ ।
दिनभर श्रम गरे पनि उचित प्रतिफल नपाउँदा मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गरे पनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा आर्थिक अवस्था नाजुक हुनेछ । कामको लागि धेरै समय दौडथुप गर्नु पर्नेछ भने दुर्गम स्थानमा स्थानान्तरणको सम्भावना रहेकोछ । पैतृक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेको छ । प्रेममा धोका हुन सक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
कल्याणकारी तथा तारिफयोग्य काम गरी चर्चामा आउन सकिनेछ । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले ठुला कामहरु बन्नेछन् । धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रमा ध्यान जाने हुनाले धार्मिक प्रतिष्ठान वा मन्दिरतिरको यात्रा हुनेछ । दाजुभाई तथा जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ । लेखन कलाको माध्यमबाट आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
पढाई-लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउनेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, नराम्रो घटना घट्न सक्छ । व्यापार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने तथा आर्थिक कारोबार बिग्रन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । माया-प्रेममा धोका हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा खटपट आउनेछ । आफन्त तथा साथिभाइबीच वैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ, सचेत रहनुहोला ।
माया प्रेममा एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा चिसोपनाको विकास हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । यात्रामा सोचेजस्तो सफलता पाउन कठिन रहेकोछ । व्पापारमा समय दिन नसक्दा वा ध्यान नदिदा घाटा लाग्न सक्छ । साझेदारि व्यावसाय सकभर आजको दिन सुरु नगर्नु होला । बिलाशि बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने भएपनि बढिनै उत्साहित हुदा नकारात्मक परिणाम देखा पर्नेछ ।
कुनै पनि कामलाई पुन: गर्नुपर्दा मानसिक तनाब बढ्नेछ । पुराना रोगहरु फेरि बल्झन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । रकम लागनी गर्नको लागि केही समय पर्खनु नै उचित रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा आर्थिक अवस्था खस्कनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई बुझ्न नसक्दा केहि समयको लागि टाडिनु पर्ने हुन सक्छ । कुनै पनि बिवादमा सामेल भए हारिने सम्भावन रहेकोछ ।
अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ भने विद्या तथा प्रतिष्पर्धामा तपाईकै नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । । काममा आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्ने तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । काम गर्ने उत्साह र हौसला बढ्नेछ । प्रेमी प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
अध्ययनमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ भने अरुकै लागि श्रम तथा शक्ति खर्च हुनेछ । रमाइलो वातावरणमा पनि मन खिन्न हुनेछ । साथिभाई तथा आफन्तसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ, ध्यान दिनुहोला । प्रेममा एक-अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्दा वैमनश्यता बढ्नेछ । व्यापार व्यावसायम समय लगानी गरे पनि आम्दानी थोरै हुनेछ । दाजुभाई तथा बन्धु सँग घरायसी कुरामा राय बाझिनेछ ।
गलत लेखाई अथवा गलत बुझाईलो आाफ्नो साख गिर्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिने भएपनि वढिनै उत्साहित हुन खोन्दा नराम्रो घट्न घट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरे पनि नाँफा कमाउँँन बढिनै समय खर्चनु पर्नेछ । माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुने भएपनि अन्तत एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाढि बढ्न सकिनेछ ।
आज २०७७ असोज ५ गते सोमबारको राशिफल
भोलि आइतबार मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरी भेटि स्वरूप एक शेयर गर्दै राशिफल पढ्नुस् !
साउन १० देखि १६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाईको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल
आज २०७७ भदौ ३० गते मंगलबारको राशिफल